परमेश्वरलाई देख्ने—अदृश्य परमेश्वरलाई कसरी देख्न सकिन्छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
“परमेश्वर अदृश्य व्यक्ति हुनुहुन्छ।” हामी उहाँलाई देख्न सक्दैनौं। (यूहन्ना ४:२४) तर बाइबलमा कसै-कसैले परमेश्वरलाई देखेका छन्‌ भनी बताइएको छ। (हिब्रू ११:२७) यो कसरी सम्भव छ र? के हामी ‘अदृश्य परमेश्वरलाई’ साँच्चै देख्न सक्छौं?—कलस्सी १:१५.
हाम्रो अवस्था जन्मैदेखि आँखा नदेख्ने व्यक्तिको जस्तै छ। कसैले आँखा देख्दैन भन्दैमा संसारमा भइरहेको कुराहरूबारे उसलाई केही पनि थाह हुँदैन भन्न मिल्छ? अहँ, मिल्दैन। आँखा नदेख्ने व्यक्तिको दिमागले विभिन्न तरिकामा जानकारी हासिल गर्छ। यसरी उसले आफू वरपर के भइरहेको छ, के-कस्ता चीजहरू छन्‌ र को मान्छे छ भन्ने कुरा थाह पाउँछ। आँखा नदेख्ने एक व्यक्तिले यसो भने: “देख्न नसके पनि म दिमागले सबै कुरा बुझ्न सक्छु।”
त्यसरी नै हामी आफ्नो ‘मनको आँखाले’ परमेश्वरलाई देख्न सक्छौं। (एफिसी १:१८) कसरी? तीनवटा तरिका विचार गरौं।
‘संसारको सृष्टिदेखि नै छर्लङ्गै देखिन्छ’
अक्सर आँखा नदेख्ने व्यक्तिको अन्य क्षमता असाध्यै तीखो हुन्छ। जस्तै, उसले सुनेको र छोएको भरमा धेरै कुरा बुझ्न सक्छ। त्यसैगरि हामीले पनि आफ्ना इन्द्रियहरू चलाएर संसारमा भएका सृष्टिका कुराहरूलाई जाँच्न सक्छौं अनि ती सबै कुरा सृष्टि गर्नुहुने अदृश्य परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौं। ‘उहाँका अदृश्य गुणहरू संसारको सृष्टिदेखि नै छर्लङ्गै देखिंदै आएका छन्‌। यी गुणहरूलगायत उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरत्वसमेत उहाँले बनाउनुभएका कुराहरूबाट बुझ्न सकिन्छ।’—रोमी १:२०.
उदाहरणका लागि पृथ्वीलाई कसरी डिजाइन गरिएको छ, विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले पृथ्वीमा हाम्रो जीवन धान्नको लागि आवश्यक कुराहरू मात्र होइन, जीवनलाई आनन्दित बनाउने कुराहरू पनि दिनुभएको छ। मन्द हावा चल्दा, न्यानो घाम ताप्न पाउँदा, रसिलो फलफूलको स्वाद लिंदा वा चराचुरुङ्गीको चिरबिर-चिरबिर आवाज सुन्दा हामी मनैदेखि खुसी हुन्छौं। परमेश्वरले दिनुभएका यस्ता उपहारले उहाँ दयालु र उदार हुनुहुन्छ अनि हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ भनेर स्पष्ट हुँदैन र?
ब्रह्माण्डमा भएका कुराहरू हेरेर हामी परमेश्वरबारे के सिक्न सक्छौं? उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर सिक्न सक्छौं। हालै वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्डको आकार पहिलेभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको कुरा पत्ता लगाएका छन्‌। रातमा आकाशतिर हेरेर यसो सोच्नुहोस्: ‘कुन शक्तिले गर्दा ब्रह्माण्डको आकार तीव्र गतिमा बढ्दै छ? यस्तो अपार शक्ति कहाँबाट आयो?’ बाइबल यसो भन्छ: सृष्टिकर्तासित “ठूलो शक्ति” छ। (यशैया ४०:२६, NRV) परमेश्वरको सृष्टिले उहाँ “सर्वशक्तिमान्‌” हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ।—अय्यूब ३७:२३.
‘उहाँको विषयमा एक मात्र छोराले बताउनुभएको छ’
दुईजना दृष्टिविहीन बच्चाकी आमा यसो भन्छिन्‌: “सुनेर मात्रै पनि तिनीहरूले धेरै कुरा सिक्छन्‌। घरभित्र होस् वा बाहिर, आफूले देखेको अनि सुनेको सबै कुरा तिनीहरूलाई बताउनुभयो भने तपाईं नै तिनीहरूका लागि आँखा हुनुहुनेछ।” त्यसैगरि “परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको छैन” तर ‘उहाँको विषयमा आफ्नो बुबाको काखमा बस्नुहुने एक मात्र छोरा’ येशू ख्रीष्टले ‘बताउनुभएको छ।’ (यूहन्ना १:१८) परमेश्वरको पहिलो सृष्टि र एक मात्र छोरा येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि “आँखा” हुनुभयो, जसमार्फत हामीले परमेश्वरको विषयमा बुझ्न सक्छौं। अदृश्य परमेश्वरको विषयमा सबैभन्दा राम्रोसित येशूले मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ।
आफ्नो बुबासँग युगौंयुग बिताउनुभएको येशू ख्रीष्टले परमेश्वरबारे के-कस्ता कुराहरू बताउनुभएको छ, हेरौं:
परमेश्वर निरन्तर काम गर्नुहुन्छ। “मेरो बुबा अहिलेसम्म काम गर्दै हुनुहुन्छ।”—यूहन्ना ५:१७.
हामीलाई के चाहिन्छ भनी परमेश्वरलाई थाह छ। “तिमीहरूले माग्नुभन्दा अघिनै तिमीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर परमेश्वर, तिमीहरूका बुबालाई थाह छ।”—मत्ती ६:८.
परमेश्वर दयालु भई हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ। ‘स्वर्गमा बस्नुहुने तिमीहरूका बुबाले खराब र असल दुवैमाथि घाम लगाइदिनुहुन्छ अनि भला र दुष्ट दुवैमाथि पानी वर्षाउनुहुन्छ।’—मत्ती ५:४५.
परमेश्वर प्रत्येक व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ। “के दुइटा भँगेरा एक पैसामा बिक्दैन र? तैपनि तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूका बुबाले थाह नपाई भुइँमा झर्दैन। तर तिमीहरूको कपालसमेत उहाँले गन्नुभएको छ। त्यसैले नडराओ: तिमीहरू थुप्रै भँगेराभन्दा पनि बहुमूल्य छौ।”—मत्ती १०:२९-३१.
अदृश्य परमेश्वरको जस्तै गुण देखाउनुभएको व्यक्ति
आँखा नदेख्ने मानिसहरूको बुझ्ने तरिका पनि निकै फरक हुन्छ। साधारणतया मानिसहरू छाया भन्नेबित्तिकै घाम नपरेको अँध्यारो ठाउँ भनेर बुझ्छन्‌। तर आँखा नदेख्ने मानिसहरू छायालाई घामको तापबाट जोगाउने शीतल ठाउँको रूपमा बुझ्छन्‌। आँखा नदेख्ने मानिसले छाया वा घाम देख्न नसकेझैं हामीले पनि आफ्नै भरमा यहोवा परमेश्वरलाई कहिल्यै चिन्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीले उहाँलाई राम्ररी चिन्न सकोस् भनेर उहाँले आफ्नो जस्तै व्यक्तित्व अनि गुण भएको एक जना मानिस पठाउनुभयो।
त्यो मानिस येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। (फिलिप्पी २:७) येशू ख्रीष्टले आफ्नो बुबाबारे बताउनु मात्र भएन, उहाँले परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर देखाउनु पनि भयो। येशूका चेला फिलिपले यस्तो आग्रह गरे: “प्रभु हामीलाई बुबा देखाइदिनुहोस्।” अनि येशूले यसो भन्नुभयो: “जसले मलाई देखेको छ, उसले बुबालाई पनि देखेको छ।” (यूहन्ना १४:८, ९) येशूको व्यवहारद्वारा तपाईं यहोवा परमेश्वरलाई कसरी ‘देख्न’ सक्नुहुन्छ?
येशू कोमल स्वभावको, नम्र र नजिकिन सजिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। (मत्ती ११:२८-३०) उहाँ अरूलाई स्फूर्ति दिनुहुन्थ्यो। त्यसैले मानिसहरू उहाँसित नजिकिन्थे। येशू अरूको दुःखमा रुनुभयो र खुसीमा रमाउनुभयो। (लूका १०:१७, २१; यूहन्ना ११:३२-३५) येशूबारे बाइबलको कुनै विवरण पढ्नुहुँदा आफू पनि उहाँसँगै भएको कल्पना गर्नुहोस्। उहाँले मानिसहरूसित कसरी व्यवहार गर्नुभयो भन्ने कुरामा मनन गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईंले परमेश्वरका आकर्षक गुणहरूबारे अझ राम्रोसँग थाह पाउन अनि उहाँसित नजिक हुन सक्नुहुनेछ।
जानकारी जम्मा गर्नुहोस्
आँखा नदेख्ने व्यक्तिले संसारमा भएका कुराहरूलाई कसरी बुझ्छ भन्ने विषयमा एक लेखिकाले यसो भनिन्‌: “दृष्टिविहीन व्यक्तिले विभिन्न स्रोतबाट (स्पर्श, बास्ना, आवाज, इत्यादि) अलि-अलि गर्दै जानकारी पाउँछ अनि ती जानकारीहरूलाई जम्मा गरेर आफ्नो दिमागमा एउटा चित्र बनाउँछ।” त्यसैगरि परमेश्वरको सृष्टिका कामहरूलाई हेर्दा, येशूले आफ्नो बुबाबारे बताउनुभएको कुराहरूबारे पढ्दा अनि उहाँले परमेश्वरका गुणहरू झल्काउनुभएको कुराबारे मनन गर्दा तपाईंले यहोवा परमेश्वरलाई एक अर्थमा देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ तपाईंलाई अझ वास्तविक लाग्नेछ।
धेरै पहिला अय्यूब भन्ने एक जना व्यक्तिले पनि यहोवा परमेश्वरलाई देखेझैं महसुस गरे। सुरुमा त तिनले परमेश्वरबारे “आफूले नजानेका” कुराहरू बोलिरहेका थिए। (अय्यूब ४२:३) तर परमेश्वरको सृष्टिका अचम्मका कामहरूबारे मनन गरेपछि अय्यूब यसो भन्न बाध्य भए: “मेरा कानहरूले तपाईंका बारेमा सुनेका मात्र थिए, तर अब ता म तपाईंलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु।”—अय्यूब ४२:५, NRV.
‘यदि यहोवा परमेश्वरलाई खोज्नुभयो भने तपाईंले उहाँलाई भेट्टाउनुहुनेछ’
तपाईंले पनि अय्यूबले जस्तै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। ‘यदि यहोवा परमेश्वरलाई खोज्नुभयो भने तपाईंले उहाँलाई भेट्टाउनुहुनेछ।’ (१ इतिहास २८:९) अदृश्य परमेश्वरलाई खोज्न र भेट्टाउन चाहनुहुन्छ भने यहोवाका साक्षीहरू तपाईंलाई मदत गर्न तयार छन्‌।
के परमेश्‍वरको नाम छ अनि के उहाँ हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ?